कसरी जर्मन छिटो सिक्ने – Vocre
कसरी जर्मन छिटो सिक्ने
नयाँ भाषा सिक्नु भारी महसुस गर्न सक्छ. शुभ समाचार यो हो कि त्यहाँ कुनै पनि भाषा सिक्न धेरै संसाधनहरू उपलब्ध छन् (र धाराप्रवाह बोल्नुहोस्!). Find out how to learn German fast with these tricks and tips for hacking pretty much any language.
नयाँ भाषा सिक्नु भारी महसुस गर्न सक्छ. शुभ समाचार यो हो कि त्यहाँ कुनै पनि भाषा सिक्न धेरै संसाधनहरू उपलब्ध छन् (र धाराप्रवाह बोल्नुहोस्!). यदि तपाइँ जर्मन भाषा कसरी बोल्ने भनेर सिक्न आवश्यक छ भने व्यापार, यात्रा, वा अध्ययन गर्दै, it shouldn’t be too difficult to learn some basic phrases and vocabulary.
सिक्दै छ जर्मन कठिनाई?
कुनै नयाँ भाषा सिक्नु गाह्रो छ - र हो, सायद गाह्रो. नेटिभ अ speakers्ग्रेजी स्पिकरहरूका लागि खुशीको खबर यो हो कि जर्मन र अंग्रेजी धेरै समान भाषाहरू हुन्, त्यसोभए जर्मन भाषा सिक्नु अ speakers्ग्रेजी स्पिकरहरूका लागि सजिलो हुन सक्दछ यो स्वदेशी स्पेनिश वा फ्रान्सेली स्पिकरहरूको लागि भन्दा.
तपाईं जर्मनमा प्रयोग हुने प्राय: सबै जसो शब्दहरू पनि चिन्न सक्नुहुन्छ, जस्तो 80 १०० सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने अंग्रेजी शब्दहरू वास्तवमा जर्मन शब्दहरू हुन् (वा जर्मन मूलका हुन्)! धेरै जर्मन शब्दहरू प्राय: प्रयोग हुने अंग्रेजी शब्दहरू जस्तो लाग्छ, र धेरै शब्दहरू एकै हुन्.
ढिलो सुरू गर्नुहोस्
हामीसँग अक्सर एउटा नयाँ सीप सिक्दा गहिरो अन्तमा उफ्रनु पर्ने प्रवृत्ति हुन्छ. कि त हामी नयाँ भाषा सिकेर अत्यन्तै डराउँछौं, वा हामी आफैंलाई धेरै नै उत्साहित पाउँदछौं - र केही पाठ पछि अभिभूत.
जब तपाईं नयाँ कौशल वा भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ, ढिलो सुरु गर्नु महत्त्वपूर्ण छ. यदि तपाईं धेरै नयाँ भोक शब्दहरू वा वाक्यांशहरू पनि छिट्टै सिक्न को लागी प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईं निराश वा बाहिरको सम्भावना बढी हुन्छ. You’re also more likely to make mistakes if you move too fast when learning German.
एक पटकमा धेरै शब्दहरू सिक्न कोसिस गर्नुको सट्टा, शब्दावलीको एक पक्षमा ध्यान केन्द्रित गरेर तपाईंको पाठहरू भाग्नुहोस् (शब्दहरु, conjugations, स्वामित्व, आदि).
तालिका अध्ययन समयहरू
यदि हामी विस्तृत योजना बनाउँदैनौं भने हामी वास्तवमै नयाँ सीप सिक्नको लागि टाँसिन सक्ने सम्भावना कम छ. जर्मन भाषा सिक्न सबैभन्दा गाह्रो भाषा होईन - विशेष गरी यदि तपाईं पहिले नै अंग्रेजी जान्नु हुन्छ भने. अझै, तपाईं आफ्नो भाषामा अध्ययन सत्रहरू अनुसूचित गर्नुहुन्न भने जर्मनको भाषा सिक्नको लागि समय पत्ता लगाउन संघर्ष गरिरहनु भएको हुन सक्छ.
तपाइँ आफ्नो अध्ययन समय WOOP गर्न चाहानुहुन्छ (इच्छा, परिणाम, बाधा, योजना). तपाईको इच्छा के हो निर्णय गर्नुहोस् (म दिनको एक घण्टा जर्मन पढ्न चाहन्छु). त्यसो भए, त्यो इच्छाको परिणाम कस्तो देखिन्छ निर्धारण गर्नुहोस् (छिटो जर्मन सिक्दै). तपाईको मार्गमा आउन सक्ने ब्रेन्स्टमम विभिन्न बाधा (मलाई पढाई मन नपर्ला, म यसको सट्टामा टिभी हेर्न चाहन्छु, आदि). अवरोध खडा हुँदा अध्ययन गर्ने योजना बनाउनुहोस् (म बिहान अध्ययन गर्छु यदि रातमा अध्ययन गर्न म धेरै थाकेको छु).
पहिलो उच्चारण सिक्नुहोस्
अ speakers्ग्रेजी स्पिकरहरूको रूपमा, हामी शब्दहरू ध्वनी गर्न प्रयोग गर्दै आएका छौं. अझै, not all letter combinations are pronounced the same in different languages.
जब तपाइँ शब्दावली शब्दहरू दृष्टिबाट सिक्नुहुन्छ, तपाईं उनीहरूलाई गलत रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईं त्यस्तो हुनुहुन्छ जो यादगार र पुनरावृत्ति मार्फत भोकब शब्दहरू सिके, there’sagood chance you’ll learn the mispronunciation of German words — and not the correct pronunciations.
खराब उच्चारण हटाउँदा तपाईंको जर्मन भाषाको अध्ययनमा थप समय थप्न सक्छ. यदि तपाइँ जर्मन छिटो सिक्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं सही उच्चारणहरू सिक्न चाहानुहुन्छ पहिलो पटक वरपर.
सब भन्दा साधारण जर्मन Vocab शब्दहरू सिक्नुहोस्
जर्मन भाषामा सयौं हजारौं शब्दहरू छन्. किन शब्दहरू सिक्नुहोस् जुन तपाईं विरलै प्रयोग गर्नुहुनेछ? सट्टा, सबैभन्दा सामान्य जर्मन शब्दहरू पहिले सिक्नुहोस्. यी शब्दहरू समावेश छन्:
को लागी: को लागी
हुनुको लागि: छ
एकचोटि तपाईंले सबै भन्दा साधारण जर्मन शब्दहरू सिके पछि, you can begin using them in short sentences.
नयाँ भोक शब्द र उच्चारण सिक्नु पर्छ? हामी मेशिन अनुवाद सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं जुन एक अरबी अनुवाद उपकरण छ र सजिलैसँग भाषणमा पाठ अनुवाद गर्न सकिन्छ, जस्तै Vocre अनुप्रयोग, मा उपलब्ध गुगल प्ले एन्ड्रोइड वा को लागी एप्पल स्टोर IOS को लागी.
आवाज इनपुट र आउटपुटमा अनुप्रयोग, त्यसोभए तपाईं अ English्ग्रेजीमा एक वाक्य भन्न सक्नुहुन्छ र वास्तविक समयमा जर्मनमा कस्तो देखिन्छ सुन्नुहोस्.
ज्ञानी शब्दहरू याद गर्नुहोस्
ज्ञानी शब्दहरू ती शब्दहरू हुन् जुन सिक्न सजिलो छ किनकि उनीहरूलाई अन्य भाषाहरूमा शब्दहरू जस्तै लाग्छ. उदाहरण को लागी, वाक्यांश, शुभ - प्रभात, जर्मनमा छ शुभ - प्रभात. यो वाक्यांश अंग्रेजी वाक्यांशसँग मिल्दो मिल्दो छ, त्यसोभए तपाईलाई सम्झनको लागि यो सजिलो हुनुपर्दछ.
Flashcards प्रयोग गर्नुहोस्
भोकब सिक्नको लागि एक प्रयास गरिएको र सही तरिका भनेको फ्ल्यास कार्डहरू प्रयोग गर्नु हो. तपाईं फिजिकल फ्ल्यास कार्डहरू इन्डेक्स कार्डमा भोकब शब्दहरू लेखेर पछाडि तिनीहरूको अनुवादहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. तपाईं एक फ्ल्यास कार्ड अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र एकैचोटि फ्ल्यासकार्डको ब्याचहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ. केहि अनुप्रयोगहरूले तपाईंलाई भ्वाइस-एक्टिवेटेड फ्ल्यास कार्डहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, meaning you can speak the word in English and get the German pronunciation at the push ofabutton.
तपाईं कसरी जर्मनमा फरक-फरक वाक्यहरू बोल्ने भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ - वा, तपाईं आधारभूत जर्मन वाक्य संरचना सिक्न र छिटो जर्मन सिक्न सक्नुहुन्छ!
नेटिभ अ speakers्ग्रेजी स्पिकरहरूका लागि खुशीको खबर यो हो कि जर्मन वाक्य संरचना अंग्रेजीमा वाक्यका लागि संरचना जस्तै समान छ. जर्मन एउटा विषय अनुसरण गर्दछ, क्रिया, अन्य (तब) वाक्य संरचना.
जहाँ जर्मन र अंग्रेजी वाक्य संरचना फरक हुन्छ, तरिका, र ठाउँ. "म आज स्टोरमा गइरहेको छु" भन्नुको सट्टा,”तपाईं भन्नुहुनेछ, “I’m going today to the store.”
एक अनलाइन कक्षा लिनुहोस्
सेल्फ-पेसिंग शिक्षाले तपाईंलाई मात्र टाढासम्म लैजान्छ. जे भए पनि तपाईले सोच्नु हुन्छ कि तपाईले तपाईको सबै निर्देशित भोकब क्विजलाई कुचल्नुभयो, तपाईं एक अनलाइन क्लास लिएर आफ्नो भाषा सीप वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ.
अनलाइन कक्षाले तपाईंलाई जर्मन / अंग्रेजी भाषा समुदाय फेला पार्न र अन्य विद्यार्थीहरूको साथ तपाईंको भाषा सीप अभ्यास गर्न मद्दत गर्दछ. अरूले कसरी प्रगति गरिरहेका छन् तपाईले पनि देख्नु हुनेछ, सबैलाई गल्ती गर्छ भन्ने महसुस गर्न सजिलो बनाउँदै.
तपाईंको शिक्षकले तपाईंको लागि मूल्यवान प्रतिक्रिया पनि प्रदान गर्न सक्छ (केहि तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईं एकल सिक्दै हुनुहुन्छ भने).
धेरै अनलाइन भाषा वर्गहरूले विद्यार्थीहरूलाई संसाधन साझा गर्न प्रोत्साहित गर्छन्, कक्षा पछि भेट, and encourage each other throughout the learning process.
एक विनिमय कार्यक्रममा शामिल हुनुहोस्
एकचोटि तपाईसँग जर्मन भाषाको आधारभूत समझ छ (आधारभूत भोकब शब्द र वाक्य संरचना सहित), तपाई वास्तविक ज्ञानमा तपाईको ज्ञानको परिक्षण गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ जर्मन र अंग्रेजी दुवै सिक्न चाहने मानिसका लागि हजारौं भाषा विनिमय समूहहरू छन्.
यी समूहहरूले दुवै व्यक्तिगत र अनलाइन भेट्छन्. केहि समूहले तपाईलाई पार्टनरसँग जोडी दिन्छ जबकि अन्यले सामूहिक कुराकानीलाई प्रोत्साहित गर्छन्. सामान्यतया, you’re paired withapartner that hasabetter understanding of English than you do German.
यदि तपाईंलाई तपाईंको भाषा विनिमय पार्टनरसँग सत्रहरूको बीचमा भोकब र उच्चारण सिक्न मद्दत चाहिन्छ भने, तपाइँ भाषा अनुवाद अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ. यी अनुप्रयोगहरूले तपाईंलाई भोकब शब्दहरू हेर्न र अंग्रेजी वाक्यहरू जर्मनमा अनुवाद गर्न मद्दत गर्दछ.
भोकरे जस्ता अनुप्रयोगहरूले तपाईंलाई अंग्रेजीमा वाक्य बोल्न र जर्मनमा भ्वाइस आउटपुट प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ. यसले तपाईंलाई वाक्य संरचना र सही उच्चारण बुझ्न मद्दत गर्दछ. सटीकताको लागि तपाइँ तपाइँको अनुवाद पनि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, no real-life partner needed.
आफूलाई जर्मन भाषामा डुबाउनुहोस्
जब तपाईं स्तर तयार गर्न तयार हुनुहुन्छ, तपाईं जर्मन भाषामा आफूलाई डुबाउन चाहानुहुन्छ! जर्मन भाषा सिक्ने उत्तम तरिका यसमा आफूलाई डुबाउनु हो. यो पहिले एक सानो डराउने र असहज महसुस गर्दछ, but the extra effort will be worth the discomfort.
एक जर्मन भोजनालय भ्रमण गर्नुहोस्
जर्मनमा आफूलाई डुबाउने एउटा सजिलो तरीका एक प्रामाणिक जर्मन रेस्टुरेन्टमा जानु हो. यदि तपाईं जर्मन एन्क्लेभको साथ शहर वा शहरमा बस्नुहुन्न भने, you may simply want to findasmall slice of Germany.
जर्मनमा तपाईंको खाना अर्डर गर्नुहोस्, र वेटरसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, बार्टेन्डर, वा मालिक. धेरै जसो जर्मन रेस्टुरेन्टहरू विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको नयाँ फाउन्ड शब्दहरू प्रयोग गरीरहेकाछन्, so they’re more likely to bealittle gentle with any of your mistakes.
जर्मन समाचार पत्रहरू पढ्नुहोस्
यदि तपाइँ तपाइँको जर्मन शब्दावली मासु खान चाहानुहुन्छ, तपाईं जर्मन वा जर्मन समाचार पत्रहरूमा पुस्तकहरू पढ्न कोशिस गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईं शब्द शब्दहरूको समुद्रमा हराउनुहुनेछ, तपाईं परिचित हुनुहुन्छ पुस्तक पढेर सुरु गर्न चाहानु सक्नुहुन्छ - केवल जर्मनमा.
बच्चाहरूको किताब मनपर्दछ ग्रिमको परी कथा वा पिप्पी लांगस्टोकिंग all have recognizable plots and are available in German.
जर्मनमा फिल्महरू हेर्नुहोस्
जर्मन सिक्ने सब भन्दा पुरस्कृत र रमाईलो तरिका मध्ये एक जर्मन भाषाको चलचित्र वा टिभी कार्यक्रमहरू हेर्नु हो - वा, केवल तपाईंको मनपर्ने टिभी कार्यक्रमहरू जर्मनमा डब हेर्नुहोस्.
केहि लोकप्रिय जर्मन फिल्महरू सामेल छन्:
गुड बाइ लेनिन
लोला रन चलाउनुहोस्
तपाईं सामान्यतया यी चलचित्रहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ नेटफ्लिक्स वा अमेजन प्राइममा भाँडामा लिन. जर्मन भाषाको चलचित्रहरू सिक्नको लागि सबैभन्दा राम्रो हो जब भाषा सिक्ने हो किनभने यी कलाकारहरू बोल्छन् सत्य जर्मनहरूले बोलेझैं (कहिलेकाँही कहिलेकाँही यी सूक्ष्मताहरू डब फिल्महरू र टिभी कार्यक्रमहरूमा हराउन सक्दछन्).
जर्मन संस्कृतिको बारेमा जान्नुहोस्
जब तपाईं संस्कृति बारे उत्साहित हुन्छन्, it’s easier to conjure excitement about the language associated with the culture.
जर्मन ईतिहासमा क्लास लिनुहोस्, जर्मनीको बारेमा यात्रा र संस्कृति टिभी कार्यक्रमहरू हेर्नुहोस्, र हप्तामा एक पटक डिनरको लागि केहि क्लासिक जर्मन भाँडा बनाउन प्रयास गर्नुहोस्. यदि तपाईं प्रामाणिक जर्मन सामग्री फेला पार्न सक्नुहुनेछ, तपाईं आफैंलाई मसलाको बोतल पढ्न र अनियमित भोकब शब्दहरू सिक्न पाउनुहुनेछ जब तपाईं खाँदै हुनुहुन्छ!
सम्भवतः जर्मन द्रुत भाषा सिक्ने उत्तम तरिकाहरूमध्ये एउटा भनेको जर्मनी भ्रमण गरेर संस्कृतिमा आफूलाई डुबाउनु हो. जबकि यो अपेक्षाकृत चाँडो भाषा सिक्ने एक निश्चित आगो तरीका हो, तपाईको जीवनलाई अन्त गर्न र अर्को महादेशमा सर्नु यो सधैं सम्भव हुँदैन (विशेष गरी महामारीको बेला!).
अझै, यदि तपाईं अहिले ठूलो कदम चाल्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, तपाईं कविहरु र विचारहरु को देश को लागी केहि महिना को लागी चाहानुहुन्छ.
धेरैजसो जर्मनहरू (विशेष गरी ती ठूला शहरहरूमा बस्नेहरू) अंग्रेजी जान्नुहोस्, तपाईं सकेसम्म अंग्रेजी बोल्नबाट बच्न चाहानुहुन्छ. तपाईका फ्लैटमेट र साथीहरुलाई भन्नुहोस् तपाईसँग अंग्रेजीमा नबोल्नु होस्. तपाइँको मातृभाषामा पुनः स्विच गर्न चाहनु यो लोभलाग्दो छ, त्यसोभए तपाईं आफैंलाई यस्तो परिस्थितिमा राख्न चाहानुहुन्छ जहाँ तपाईं यसो गर्न कम गर्नुहुनेछ.
आफु प्रति नम्र हुनु होस्
भाषा सिक्नु सजिलो उपलब्धि होइन. You’re bound to come up against obstacles or feel embarrassed by mistakes from time to time.
तपाईंले जर्मन सिक्दै गरेको रूपमा आफैलाई दयालु हुन सम्झनु महत्त्वपूर्ण छ. Practicing self-kindness will help you become more resilient — and being kind to yourself will make it easier to dust yourself off and keep going.
आत्म-अनुकम्पा अभ्यास गर्नुहोस्
आत्म-अनुकम्पा अभ्यास गर्ने मानिससँग नचाहिने भन्दा बढी लचिलोपन हुन्छ! Self-compassion simply means that you’re able to sit with uncomfortable feelings and accept these feelings.
साधारण रूपमा बयान गर्दै, "यो कठिन छ,"" म मूर्ख महसुस गर्छु,”वा, “यस्तो लाग्छ कि मैले यो सामानहरू सहि कहिले पनि पाउँदैन,"तपाइँ तपाइँको नकारात्मक भावनाहरु लाई जानु दिनुहोस् भन्दा पहिले तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छ. Studies show that people that do this one act of self-compassion are more likely to succeed on future tests and retain information more accurately.
लर्निंग जर्मन रमाईलो बनाउनुहोस्
यदि तपाईं रमाईलो गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ बढिरहनु बढी सम्भावना हुनुहुन्छ! तपाईंको अध्ययनलाई सकेसम्म रमाईलो बनाउन कोसिस गर्नुहोस्. जर्मन बिदा मनाउनुहोस्, एक dirndl वा lederhosen अनलाइन किन्नुहोस्, जर्मन संगीत सुन्नुहोस्, र जर्मनी बाट साथी बनाउनुहोस्.
नयाँ भाषा सिक्ने बित्तिकै हार मान्न सजिलो छ. तपाईं अप्ठ्यारो महसुस गर्न लाग्नुहुन्छ, अलमल, र असजिलो - धेरै!
अझै, तपाईंले शब्दहरू सिक्न प्रयास गर्नु पर्ने हुन सक्छ, वाक्य संरचना, र फेरि फेरि वाक्यांशहरू. एक भाषा सिक्ने र छोड्ने बीचमा सबैभन्दा ठूलो भिन्नता भनेको लगनशीलता हो (प्रतिभा वा प्राकृतिक क्षमता होईन).
रोमान्स भाषाहरू भन्दा जर्मन अ्ग्रेजी स्पिकरहरूका लागि सिक्न सजिलो हुन सक्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि जर्मन छिटो सिक्न सजिलो हुनेछ.
यससँग टाँसिनुहोस्, माथिको सल्लाहहरूको केहि प्रयास गर्नुहोस्, र तपाईं जर्मन बोल्नुहुनेछ र अन्य संस्कृतिहरूसँग सञ्चार गर्दै कुनै समय मा!